देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ? — Imandarmedia.com
देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ?
उनले आफ्नो आनीवानी परिवर्तन गर्न आह्वान समेत गरे । सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘ हामीसँग त्यसबाहेक अरु विकल्प छैन । सरसफाईमा उचित ध्यान दिनुस् । हात धुने, सकेसम्म घरमा बस्नुस् । अत्यावश्यक बस्तु सञ्चय नगर्नुस् ।’ नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम नदेखिनु राम्रो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
देशमा संक्रमण फैलिन नदिने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउने लगाएतको काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जोखिम न्युनिकरणका लागि ५ वटा तयारी बैठक बसिसकेको बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर एकिकृत रुपमा काम गर्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हामीले केही समयका लागि आफ्नो आनीवानी व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’